How To be Gtalk Hacker? (To know Other Gtalk user password) — MYSTERY ZILLION
How To be Gtalk Hacker? (To know Other Gtalk user password)
How To Hack Gtalk Password Last3min
ကျနော်ထင်တာတော့ ကီးလော့ကာလို ဟာမျိုးလေးနဲ့တူတယ်။ ဟုတ်လားမသိဘူး။ ဘက်ဂရောင်း မှာ run ပြီး ဂျီတော့မှာ ရိုက်တဲ့ဟာတွေ မှတ်ထားပေးတဲ့ဟာလေးနဲ့ တူတယ်ဗျ။ ဟုတ်လားမသိဘူး။:39::39::39:
အဲဒါကြီးကVirus လား ဖွင့်လို့လဲမရဘူး
Virus ဟုတ်မဟုတ် ဖြေရှင်းချက်လေးပေးစေချင်ပါတယ်။
I know that if the user doesn't online more than5days we can change their password if u can guess the security question
hacker ပေးတဲ့ link ကမှားနေလို့ပါ...အောက်က link အတိုင်းဖြစ်နေတယ်။
အောက်က link အတိုင်းဆိုရင် download ဆွဲလို့ရပါပြီ။
Linkမှားတာမဟုတ်ဘူးဗျ ဒေါင်းပီးပီ. နောက်ဆွဲမည့်သူများ ဖြေရှင်းချက်ထွက်လာမှဆွဲကြပါရန်။
သေချာပေါက် ဗိုင်းရပ်စ်ပါ။ အဲ့ဒါရမ်းပြီးတာနဲ့ Task Manager ခေါ်လို့မရတော့ဘူး။ နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်ဦးမလဲ မသိဘူး။ အဲ့ဒီလောက်ထိ အရောက်ပို့တာတော့ မကောင်းပါဘူးဗျာ။ ဒီမှာ အားလုံး ညီအကိုမောင်ရင်းနှမတွေလို အကောင်းတွေကိုဖလှယ်နေကြတယ်။ အဆိုးတွေကို ကာကွယ်ဖို့လုပ်နေကြပါတယ်။ တကယ်သာ ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ရင်တော့ အတော့ကိုဆိုးတာပဲဗျ...